धन ल्याउछु भन्दै उडेका नेपालीहरु यसरी फर्किए श’व बनेर काठको बा’कसमा ! – AB Sansar
धन ल्याउछु भन्दै उडेका नेपालीहरु यसरी फर्किए श’व बनेर काठको बा’कसमा !
December 4, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on धन ल्याउछु भन्दै उडेका नेपालीहरु यसरी फर्किए श’व बनेर काठको बा’कसमा !
आफ्ना इच्छा, चाहना वा आवश्यकता परिपूर्तिका लागि आफ्नो देश छाडेर रोजगारिका लागि अन्य मुलुक जानुलाई नै वैदेशिक रोजगारिका रुपमा लिइन्छ । नेपालमा औद्योगिक क्रियाकलाप अत्यन्तै कमजोर भएको र कृषिमा पनि समसामयिक आधुनिकीकरण गर्न नसक्नाले आयमा कमी हुँदा जीवन निर्वाह गर्न पनि क’ठिन परिरहेको छ ।
जसले गर्दा अहिले लाखौ नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य भइरहेका छन् र रोजगारी गएका युवाहरु मध्ये दैनिक एक जना त काठको बा’कसमा फर्किने गरेका छन् । लोक गायक प्रकाश सपूतलेले भने जस्तै धन ल्याउछु भन्दै गएका थियौ,उडेर आकाशमा। कस्तो भइ गयौ,कस्तो भइ आयौ,काठको बा’कसमा। यो गीतलाई चरिथार्थ गर्दै सुन्दर सपनाहरु मनमा राखेर खाडी लगायत बिभिन्न देश पसेका नव जवान युवाहरु यसरी दैनिक काठको बा’कसमा फर्किनु पर्दा कस्को मन न’रोला र?
नेपालमा लकडाउन भएपछि कोरोना लगायत अन्य विभिन्न कारणले ४० जनाको मृ’त्यु भएको र हालसम्म २० जनाको श:व नेपाल पठाईसकिएको छ भने ९ वटा श:व कतारमै दा:हसं:स्कार गर्न परिवारबाट सहमति प्राप्त भएको र ३ जनाको दा:हसं:स्कार सम्पन्न भईसकेको कतारस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । कतारमा अझै ११ जनाको श’व रहेको छ ।
हालसम्म साउदीबाट २० वटा श:व, मलेसियाबाट ३१ वटा श’व, कुवेतबाट ७ जना श’व नेपाली पुगिसकेको छ भने यूएईबाट ५ नेपालीको श’व नेपाल पठाईसकिएको त्यहाँ स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । यस्ता, बहराइनबाट ३ वटा श’व, ओमानबाट १ वटा श’व पनि नेपाल पुगिसकेको छन् । अझै बाँकी कतारमा ११ जनाको श’व’, साउदीमा ५९ श’व र मलेसियामा २३ श’व बाँकी रहेको त्यहिँ स्थित दूतावासहरुले जनाएका छन् । यस्तै यूएईमा १४ जनाको श’व, कुवेतमा ५ जनाको श’व र बहराइनमा १ जना श’व नेपाल पठाउन बाँकी रहेको छ ।
Omg जाडोमा नुहाउँदा ध्यान दिनै पर्ने कुराहरु
एलन मस्क पुनः बने विश्वकै धनी मान्छे
February 21, 2021 February 21, 2021 Ab-संसार